Juan Ramón Jiménez. Beyond Platero neni. 5 poems | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ramon Jimenez akaberekwa pa December 23 we1881, yatove ingangoita yechi 24, muMoguer (Huelva), uye ndiye mumwe wevanyori vakakurumbira veSpanish enguva dzese. Basa rake rinozivikanwa ndere Platero neni, uyo kubudirira kwake kwakatopfuura zvese zvimwe zvaakanyora. Nhasi Ndinorangarira chimiro chake chine nhetembo shanu kudarika mbongoro iyo.
2.2 Imwe mhepo
Akatanga kunyora mukuyaruka uye gare gare akasiya zvidzidzo zvake zvemutemo kuti azvipire chose kunhetembo. Akasangana uye kukwesha mafudzi nevanyori vane mukurumbira venguva yake, se Rubén Darío, Valle-Inclán, Unamuno, hama dzaMachado, José Ortega y Gasset kana Pío Baroja uye Azorín, pakati pevamwe.
Akapasa rake vechidiki kesken Moguer, Seville, France neMadrid, izvo zvakamutendera kudzidziswa kwakasimba. Akatanga kutsikisa akafuridzirwa kunyanya ne Bécquer uye Espronceda. Mabhuku ake ekutanga aive: Nymphaeas, Violet mweya, Rhymes, Sad arias, Kure magadheni y Mufundisi.
MuMoguer akanyora Platero neni, chii chaive kubudirira pakarepo uye yakakurumidza kududzirwa mumitauro makumi matatu. Uye yatove muna Gumiguru 1956 vakamupa iyo Mubayiro weNobel muMabhuku.
Handidzoke. Uye nousiku
kudziya, kunyarara uye kunyarara,
nyika icharara, kumwaranzi
yemwedzi wayo wakasurukirwa.
Muviri wangu unenge usipo
uye nepahwindo rakavhurika
mhepo inotonhorera ichauya,
kukumbira mweya wangu.
Handizive kana paizove nemunhu akandimirira
yekusavapo kwangu kwakapetwa kaviri,
kana ndiani anotsvoda ndangariro dzangu,
pakati pekupwanya uye misodzi.
Asi pachave nenyeredzi nemaruva
uye kugomera uye tariro,
uye rudo munzira,
Uye piano iyoyo icharira
sezvakaita muusiku huno hwakasimba,
uye hakuzovi neanoteerera
kufunga, pahwindo rangu.
Uye pamusoro pematenga edzimba
Kurwisana nedenga ramambo
yero uye girini
Ndakange ndodanidzira kupenga
pamusoro pematenga edzimba).
Pakati pekufuma kwezuva
uye mashiripiti kumabvazuva,
mamiriro ekunze anopinza,
akadzora mweya wangu.
Rudo, chii chinonhuwirira? Zvinotaridza, kana iwe uchida,
kuti nyika yese ine runyerekupe rwechitubu.
Mashizha akaoma anotendeuka uye matavi nechando,
uye achiri kupisa uye achiri mudiki, achinhuwirira ruva risingaperi.
Kwese kwaanozarura maruva asingaoneki,
kwese kwaakabva ndekwedenga -kuseka kana kusuwa-,
mukadzi kutsvoda kwake anotora zvinoreva zvemashiripiti
izvo, semumakwara, zviri kugara zvichivandudzwa ...
Mimhanzi kubva kumakonzati akanaka inouya kumweya,
mazwi emhepo mhepo pakati pemasango;
gomera nekuchema, nekugomera nekuchema
ivo vanosiya senge kutsva kwekudanana kwehoneysuckle ...
Oo maoko ako akatakurwa nemaruva! Ivo vakanyanya kuchena
maoko enyu kupfuura maruva. Uye pakati pemashiti machena
zvakafanana nezvidimbu zvenyeredzi zvinoonekwa,
kukunda mapapiro emabhururufuru, kupfuura silika dzakachena.
Vakadonha pamwedzi here? Vakatamba here
muchirimo chekudenga? Ivo vanobva kumweya here?
… Dzine rukudzo rusina kujeka rwemamwe maruva epanyika;
vanopenya zvavanorota, vanozorodza zvavanoimba.
Huma yangu yakadzikama, sedenga remasikati,
kana iwe, samaoko ako, uchifamba pakati pemakore ayo;
kana ndikavatsvoda, iyo ember yepepuru yemuromo wangu
inonamira kubva pakuchena kwayo kwemabwe-emvura.
Maoko ako pakati pezviroto! Muchinjikwa, hangaiwa
yemoto chena, yeangu hope dzakaipa,
uye, mambakwedza, vanondivhura, sezvo vari mwenje wako,
iko kupfava kujekesa kwesirivha yekumabvazuva.
Mufananidzo wepamusoro uye nyoro wekunyaradza,
mambakwedza emakungwa angu ekusuwa,
lis yorugare nezvinonhuwira zvekuchena,
Mubairo mutsvene wedhiri rangu refu!
Kunge hunde yeruva redenga,
kukwirira kwako kwakarasika mukunaka kwayo ...
Paakatendeudzira musoro wako kwandiri,
Ndakafunga kuti ndiri kusimudzwa kubva pasi rino.
Iye zvino, mumambakwedza akachena emaoko ako,
kudzivirirwa pachipfuva chako chinoratidzika,
Anondijekera sei majeri angu anoita iwo!
Kupwanya kwakaita moyo wangu
ndinotenda kurwadziwa, kutsvoda kutsva
kuti iwe, kunyemwerera, kunyora izvozvo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Juan Ramón Jiménez. Beyond Platero neni. 5 nhetembo
Kunyangwe isu tinenge nguva dzose tichipa mvumo yekuburitswa kwenhetembo naJuan Ramón Jimenez, zvaisazove zvakashata dai, kunze kwekuremekedza, akange akumbira mvumo yekuzviita sezvo basa remunyori richichengetedzwa neMutemo Wezvinhu Zvepfungwa.